क्यान्सरपीडित ८ वर्षीया बालिकाको उपचारका लागि सहयोगको याचना » खबरहरुको एउटै केन्द्र
क्यान्सरपीडित ८ वर्षीया बालिकाको उपचारका लागि सहयोगको याचना
सोमबार, जेष्ठ २८, २०७५ १५:२९ मा प्रकाशित !
चितवन। सानै उमेरमा रक्त (ब्लड) क्यान्सर भएकी रत्ननगरकी एक बालिकाको उपचारका लागि परिवारले सहयोगको याचना गरेका छन्।
चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–१५ माधवपुरकी ८ वर्षीया बालिका शिरिषा लामिछानेलाई ब्लड क्यान्सर भएपछि आार्थिक अवस्था कमजोर भएको भन्दै परिवारले सहयोगको याचना गरेका हुन्। उनको चितवनस्थित भरतपुरको बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा विगत तीन हप्तादेखि उपचार भइरहेको छ।
उनकी ठूलीआमा सीता लामिछानेले पैसा नभएकाले उपचारमा समस्या भएको भन्दै आर्थिक सहयोग गर्न सबैमा आग्रह गरिन्। बालिकाको उपचारका लागि हालसम्म चार लाख खर्च भइसकेको भन्दै उनले अझै २०-२५ लाख खर्च हुने चिकित्सकको भनाइ उद्धृत गर्दै जानकारी दिइन्।
शिरिषाको उपचारका लागि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत शिरिषा लामिछाने बचाउ अभियान शुरु गरिएको छ। उक्त अभियानबाट हालसम्म रु ५० हजार संकलन भइसकेको छ। शिरिषाको उपचारका लागि हिमालयन बैंक लिमिटेडको नारायणगढ शाखामा रहेको शिरिषा लामिछानेको खाता नं ००८०७३५३५६००१९ मा आर्थिक सहयोग गरिदिनसमेत परिवारले आग्रह गरेको छ।
उनकी आमाले छाडेर अन्तै गएकाले आफूलाई आर्थिक जोहो गर्न थप समस्या भएको बुबा नारायण लामिछानेको भनाइ छ। नारायण वैदेशिक रोजगारीमा गएका बेला उनको रेखदेख ठूलीआमा सीताले गर्दै आएकी थिइन्। “श्रीमती गएपछि छोरीको मुख हेरेर बसिरहेको थिएँ”, पीडा पोख्दै नारायणले भने, “छोरीलाई पनि ब्लड क्यान्सर भयो, मेरो अनुरोध छ छोरीलाई बचाई दिनुप-यो ।”रासस
PREVIOUS POST Previous post: ललितपुरको युएन पार्कमा प्रहरी र गुन्डा नाइके अशोक लामा बिच गोली हानाहान,
NEXT POST Next post: जग्गाकाे बिबादमा महिलाद्धारा महिला माथी निर्घात कुटपिट, कुटपिट गर्ने दुई जना पक्राउ
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, जेष्ठ २८, २०७५ १५:२९
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, जेष्ठ २८, २०७५ १५:२९
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, जेष्ठ २८, २०७५ १५:२९
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, जेष्ठ २८, २०७५ १५:२९
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, जेष्ठ २८, २०७५ १५:२९